केकीको फिटनेश राज जुम्बा र योग आलोपालो गर्छु - Nepali Mato
केकीको फिटनेश राज जुम्बा र योग आलोपालो गर्छु
३ श्रावण २०७६, शुक्रबार १४:२३ July 19, 2019 Nepali MatoLeaveaComment on केकीको फिटनेश राज जुम्बा र योग आलोपालो गर्छु
म्युकिज भिडियो हुँदै फिल्ममा प्रवेश गरेकी केकी अधिकारीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा एक दशक बिताइसकेकी छिन्। सन् २०१० मा फिल्म ‘स्वर’ बाट डेब्यू गरेकी उनले थुप्रै स्मरणीय फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन्। अघिल्लो साल ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ बनाएर निर्माणमा प्रवेश गरेकी उनले यो वर्ष फिल्मसँगै ‘कमेडी च्याम्पियन’ शीर्षकको कमेडी टेलिभिजन कार्यक्रम ल्याउँदै छिन्। सकारात्मक सोचलाई आफ्नो सुन्दरता र तन्दुरुस्तीको कारण मान्ने केकीले ‘सम्पूर्ण’लाई ( ‘जुम्बा र योग आलोपालो गर्छु’) आफ्नो फिटनेस रहस्य बताएकी छिन्।
छरितो ज्यानका लागि जिम
जुम्बा र योग आलोपालो
जिम जान थालेको छ वर्षजति भयो। काठमाडौँ, महाराजगञ्जको ‘निरामय फिटनेस सेन्टर’मा सुरुदेखि अहिलेसम्म नियमित जाने गरेकी छु। त्यहाँ जिम मात्र होइन, जुम्बा र योग पनि गर्न पाइन्छ। मैले योग र जुम्बा आलोपालो गरी गर्ने गरेकी छु। हप्ताको तीन दिन जुम्बा गरेँ भने बाँकी तीन दिन योग गर्छु।
सुटिङ छैन र बिहान अरू काम छैन भने जिममा कम्तीमा दुई घण्टा बिताउँछु। जिम गइसकेपछि कार्डियो गरेसँग मेरो जिम सुरु हुन्छ। २० मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म कार्डियो गर्छु। त्यसपछि १५–२० मिनेट वेट लिफ्टिङ गर्छु। केही बेर आराम गरेर जुम्बा वा योग जे गर्ने हो, त्यो गर्छु। जुम्बामा त बजेको गीतमा झ्याम–झ्याम नाचिन्छ। तर, योग गर्दा चाहिँ अनुलोम–विलोम र कपालभाँती गर्छु। सुटिङ परेको छ भने यही अभ्यास आधा घण्टामा सकाउँछु। तर, जिम जान चाहिँ छुटाउँदिनँ।
८० प्रतिशत खाना, २० प्रतिशत जिम
खानामा सन्तुलन छैन भने जिम जति गरे पनि केही फरक पार्दैन। त्यसैले मैले खानालाई ८० प्रतिशत र जिमलाई २० प्रतिशत मान्ने गरेकी छु। सही समयमा सही खानाले मात्र शरीर स्वस्थ हुन्छ। दुई ग्लास कागती पानी खाएर मेरो दिनको सुरुवात हुन्छ। पानीपछि एउटा स्याउ खान्छु। खाली पेटमा अरू खानेकुरा खायो भने ग्यास्ट्रिक हुने सम्भावना हुन्छ। तर, स्याउले न्युट्रलाइज गर्छ। बिहान र बेलुका दुवै समय भात खान्नँ, रोटी खान्छु। त्यो पनि जम्मा दुई–दुई वटा। रोटीसँगै तरकारी र अचार खान्छु। थोरै खाने तर खाइरहने मेरो बानी छ। हरेक दुई घण्टामा केही न केही खानै पर्छ। त्यसैले मेरो झोलामा स्याउ र केही फलफूल हुन्छन् नै। कहिलेकाहीँ राति अबेरसम्म पढ्दा वा फिल्म हेर्दा अलिक ढिलासम्म बस्नुपर्‍यो भने बदाम वा स्वाउ खान्छु।
शरीर स्वस्थ रहन निद्राको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। सुत्ने रुटिन पनि नियमित फलो गर्छु। सुटिङ वा अरू कुनै काम परेन भने बेलुका ७ बजेसम्म खाना खाइसक्छु र १० बजेसम्म सुतिसक्छु। तस्बिर: प्रस्तुतिः कुबेर डंगोल
विश्वकै लामो खुट्टा भएकी मोडलको बोल्ड अवतार
उदाहरणिय अनि अचम्मको जोडी पहिलो पटक मिडियामा ( भिडियो सहित अन्तर्वाता )
१५ श्रावण २०७६, बुधबार २१:०६ July 31, 2019 Nepali Mato
भने मार्दिन्छु भन्दै १७ वर्षे छोरीलाई बलत्कार ! पेटमा ६ महिनाको गर्भ ! घरापरिवाको हरि बिजोग,हेर्नुहोस भिडियो
११ जेष्ठ २०७६, शनिबार २१:१८ May 25, 2019 Nepali Mato
नेपाललाइ फकाउदै भारत भन्छ – अब नाकाबन्दीको कुरा बिर्सिदिऔँ
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:५१ May 23, 2019 Nepali Mato
एकाबिहानै त्रिशूलीमा ट्रक खस्यो : चालक हाम फालेर बाँच्न सफल, ट्रकको खोजीकार्य जारी
२० श्रावण २०७६, सोमबार ०८:५९ August 5, 2019 Nepali Mato
३२ श्रावण २०७६, शनिबार १०:२६ August 17, 2019 Nepali Mato
भद्रगोल खेल्नकै लागी कपाल मुण्डन, आमा सम्झिएर आँसु रोक्न सकिनन् …(भिडियाे सहित)
२५ माघ २०७५, शुक्रबार १८:३९ February 8, 2019 Nepali Mato